Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - ဒါဝိဒ်သည် Ley အဆိုပါ NoFap လှုပ်ရှားမှု (မေလ, 2015) တိုက်ခိုက်မှု
မှတ်ချက် YBOP: nofap ကိုတိုက်ခိုက်နေသော David Ley ၏ blog post ကိုဤအချက်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် - ၁) ညစ်ညမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောသိပ္ပံဟုခေါ်သောဆေးလိပ်သည်မီးခိုးနှင့်ကြေးမုံဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ နီကိုးလ် Prause & David Ley ။ Update ကို, 2019: ဒါဝိဒ်သည် Ley ယခုယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး xHamster နေဖြင့်လျော်ကြေးငွေခံရနေပါသည်!
David Ley ၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် အဆိုပါ NoFap ဖြစ်ရပ်ဆန်း ကောက်ရိုးအမျိုးသားများ၊ ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်မုသားများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ Ley ၏စာတွင်သူ၏တောင်းဆိုချက်များအားပြန်လည်ဖော်ပြရန်မပါရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ Ley သည်မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထားသည်မှာသတိပြုပါ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ Ley ၏ရာထူးသည်သူ၏စွပ်စွဲချက်များ၊
Ley ၏ရေးသားသူဖြစ်ပါသည် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား။ သူ 30 စာဖြင့်ရေးသားထားပြီးသို့မဟုတ်ဒီတော့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် NoFap, porn စွဲ, လိင်စွဲလမ်းနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ထှကျသှားစပွေီး။ မျိုးစုံအခါသမယတွင်ဒါဝိဒ်သည် Ley (NoFap တည်ထောင်သူအလက်ဇန္ဒား Rhodes နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ရဖျက်ဖို့နီးကပ်မဟာမိတ်နီကိုးလ် Prause နှင့်အတူပူးပေါင်းထားပါတယ်နှင့်အခြားသူများ)။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဥပမာအနည်းငယ်ပေးသည် (link များမှတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အုပ်စုများကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ င်စာမျက်နှာများပါရှိသည်။ ) အောက်ပါကဏ္sectionsများသည် Prause နှင့် Ley တို့၏သဘောသဘာဝကိုဖော်ပြသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ။ ။ Prause & David Ley သည် NoFap ကိုတည်ထောင်သူ Alexander Rhodes အားတိုက်ခိုက်သည်
David Ley & Prause သည် YBOP / Gary Wilson & Nofap / Alexander Rhodes နာဇီကိုထောက်ခံအားပေးသူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရရန်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ, 2018: Prause သူမက FBI ကဖို့ "အမှတ်စဉ် misogynist" အလက်ဇန်းဒါး Rhodes ကဖော်ပြခဲ့သည်မူကြောင်းကို tweets ။
ဒါ့အပြင်ဒေးဗစ်လလေကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဟာအန္တရာယ်ကင်းတယ်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကပြproblemsနာတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်“ အခြားပြissuesနာ” တွေကြောင့်လို့ပြောတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်လီယိုအားညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို“ အခွင့်အာဏာ” အဖြစ်မကြာခဏဖွင့်ကြသည်၊ ။ ဒေါက်တာ Ley ကဲ့သို့သူတို့လည်းအလွယ်တကူမရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည်အာရုံနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာတွင်ပညာရေးလုံးဝမရှိခြင်းနှင့်မူလသုတေသနကိုဘယ်တော့မှမထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်းမီဒီယာတွင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများကိုပုံသွင်းခဲ့သည်။
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည် Ley ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့် Twitter ပေါ်တွင်စသည်တို့ကို Nofap, reddit / Pornfree, RebootNation, တိုက်ခိုက်ခြင်း၏သမိုင်းရှိပါတယ်။ မိမိအအပြောအဆို၏မှိုင်းတိုက်တိုးတကျခဲ့ပေမယ့်သူမရှိတော့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများခွင့်ပြုပါတယ်။ Ley အများဆုံးညစ်ညမ်း-related ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအပေါ်မှတ်ချက်များကိုပိတ်ဖို့ (သို့မဟုတ်သူမှတ်ချက်များကိုဖွင့်လှစ်ပါလျှင်ထိုသူသည်မိမိတောင်းဆိုမှုများစိန်ခေါ်သူတို့အားဖျက်) ။ မိမိအပေါ်မှတ်ချက်များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒါပြုတော်မူပြီ porn-သွေးဆောင် ED တစ်ဒဏ္ဍာရီတောင်းဆို post မသွားဘဲနေ၏။ အထူးသဖြင့်သူ့ကိုတာ ၀ န်ယူရန်ကျွမ်းကျင်သူ (၂) ဦး ကထိုရာထူးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များသည်နောက်ဆုံးတွင်မှတ်ချက်ပေးရန်တားမြစ်ခဲ့သည်။
လောရင့်အေအပြုံးပုံ MD အားဖြင့်မှတ်ချက်
ဒေါက်တာ Rosalyn Dischiavo အားဖြင့်မှတ်ချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ: ထိုသို့သော Nofap အဖြစ် Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုများကိုတိုကျခိုကျဖို့စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးအဘို့ကိုဘယ်လိုကျင့်ဝတ်ဖြစ်သနည်း သူ၌အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုအယူအဆနှင့်ပြ,နာရှိပါကပြန်လည်ထူထောင်ရန်ရုန်းကန်နေရသူများထက်သုတေသနလုပ်နေသောသိပ္ပံပညာရှင်များကိုသူတိုက်ခိုက်သင့်သည်မဟုတ်လော။ ကင်ဆာကိုမယုံကြည်ပေမယ့်ကင်ဆာရောဂါဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်မယ့်အစားသူတို့ကျန်းမာရေးပြန်လည်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကင်ဆာလူနာတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးသွားတဲ့ "သိပ္ပံပညာရှင်" ကိုမင်းဘယ်လိုထင်မလဲ။
ထိုအုပ်စုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်စာပေများကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီညွတ်မှုရှိသနည်း။ ငါ Ley ၏ post မှတဆင့်ချင်းစီ -line-line ကိုသွားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာ Nofap တိုက်ခိုက်နေသည်သူ၏ပို့စ်မှထောက်ခံမှု၏ဥပမာအနည်းငယ်ကို:
"စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုက r / NoFap လှုပ်ရှားမှုမှာဘယ်သူမှ neurophysiology နဲ့ function ကိုသုတေသနပြုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ "
Ley သည် Nofap အသင်းဝင် ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်၏အလုပ်အကိုင်များကိုသိရန်တောင်းဆိုနေသည်။ တကယ်လား အမှန်တကယ်တွင် Nofap တွင်သိပ္ပံပညာရှင်၊ စိတ်ပညာရှင်နှင့် MD ကဲ့သို့သောခွဲစိတ်ဆရာဝန်များပါဝင်သည်။ ဒီမှာ ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူ MD အနည်းငယ် (ပုံ) ။ ဒီမှာပါ ငယ်ရွယ်စိတ်ရောဂါကျွန်မရေဒီယိုရှိုးအပေါ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းဘယ်သူကို PIED, သူ။ Ley ဒီဘာသာရပ်အပေါ်သူ၏စွဲကိုက်ညီသောကင်လုပ်ခိုင်းတက်အောင်၏ဘာမျှမထင်:
သူတို့အစား ဦး နှောက်သိပ္ပံပညာသည်အန္တရာယ်ရှိရန်လုံလောက်သောလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီး၊ သူတို့မြင်တွေ့ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကိုတွေ့မြင်ပြီးသူတို့၏ယူဆချက်များကိုထောက်ခံရန် ဦး နှောက်သိပ္ပံကိုအနက်ဖွင့်ပေးသောစိတ်အားထက်သန်သောအပျော်တမ်းများဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူမသာဓက၊ မကိုးကားချက်တွေ၊ Ley သည် neurobiology တွင်နောက်ခံလုံးဝမရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤသည် Ley ၏အခြား porn-related ရေးသားချက်များတွင်တူညီသောပြောဆိုချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အဖြစ်မှန်ကားအဘယ်နည်း။
ပထမ ဦး စွာအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၄၁ ခုနှင့် porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ထုတ်ဝေသည့်စာပေ / ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ၂၁ ခုရှိသည်။ လေ့လာမှုနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတိုင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံအတွက်ထောက်ခံမှုဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ Porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ဦးနှောက်လေ့လာရေး တစ် ဦး မှတက်နေ့စွဲစာရင်းသည်။ ယင်းတို့ကစိတ်အားထက်သန်သောအပျော်တမ်းများမဟုတ်သလိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုပြောခြင်းသာဖြစ်သည်။ Cambridge တက္ကသိုလ်၊ Yale တက္ကသိုလ်နှင့် Max Planck Institute မှအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တနည်းကား, ထိုထုတ်ဝေလေ့လာမှုများ၏ 100% ပါပဲ။ ဤရွေ့ကား ဦး နှောက်လေ့လာမှုများအဖြစ်ကောင်းစွာပိုကြီးတဲ့အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း 330 အင်တာနက်စွဲလမ်း ဦးနှောက်လေ့လာမှုများ ရောက်ရှိလာကြပါပြီ, အားလုံး မူးယစ်ဆေးစွဲ၌တွေ့မြင်ကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖေါ်ပြခြင်း။ များစွာသောအင်တာနက်စွဲမှုလေ့လာမှုများတွင် porn အသုံးပြုသူများပါ ၀ င်သည်။ အင်တာနက်အခြေပြုလှုံ့ဆော်မှုများကရောဂါဗေဒလေ့လာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (ဥပမာ - စွဲ) ။
အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်သည့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်တူညီသောအခြေခံ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ယန္တရားများတူညီကြသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည်။ သက်သေအထောက်အထားများ၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်အညီ, အမေရိကန်စွဲဆေးပညာအသင်းက "စွဲလမ်းအသစ်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲလမ်းမှုအပါအ ၀ င်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများရှိနေကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ASAM မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် ၃၀၀၀ သည် စစ်မှန်သော အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ဂူနံရံများပေါ်တွင်ကပ်ထားသည့်ကိန်းဂဏန်းများထက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်လူ့ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဟုပြောဆိုသော Ley နှင့်အခြားလိင်ပညာရှင်များကစွဲလမ်းမှုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ ASAM တွင်အဖွဲ့ဝင်များတွင်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များပါဝင်သည်။ Ley ၏ဘလော့ဂ်များကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ သူကအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး တည်းစွဲချက်ကိုမကိုးကားပါဘူး။ Ley သည်သူ၏ပြောဆိုချက်များကိုထောက်ခံရန်“ သိပ္ပံပညာ” သည်အဘယ်နည်း။ အဓိကအားဖြင့်သူနှင့်သူ၏လက်ဝှေ့သမား Nicole Prause ကသူတို့၏ sexology ခရိုနီများကရာဘာတံဆိပ်တုံးထုတ်လုပ်သည်။ ဤရွေ့ကားစာတမ်းများရိုးရှင်းစွာစွဲ neuroscience ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်မလွန်လိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 2018 ၏အဖြစ်ကျနော်တို့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုရှိသည်။ ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
အံ့သြစရာမှာ Ley ၏“ သိပ္ပံ” အများစုသည်သူကိုယ်တိုင်နှင့်လူနှစ် ဦး အပေါ်သာမှီခိုနေရသည်။ နီကိုးလ် Prause, ဤနှစ်ခုစာတမ်းများ:
ပထမဦးစွာစက္ကူ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည် hypersexuality မဟုတ်ဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များမှရရှိသော neurophysiological response များနှင့်ဆက်စပ်သည်” (2013) ။ နီကိုးလ် Prause အဓိကရေးသားသူခဲ့သည်
ဒုတိယစာတမ်း -ကရာဇ်မင်း၌အဝတ်အစားမရှိ - 'အပြာစာပေစွဲလမ်းမှုပုံစံ' ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ' (2014) ။ David Ley & နီကိုးလ် Prause အဓိကစာရေးဆရာများဖြစ်ကြသည်။
Ley & Prause သည်စက္ကူ # ၂ ရေးရန်ပူးပေါင်းခဲ့ရုံသာမကစာတစ်စောင်ရေးရန်လည်းပူးပေါင်းခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် စက္ကူ #1 အကြောင်းကို blog post: ။ အဆိုပါ blog post:5လအတွင်းထပြသ ရှေ့မှာ Prause ၏စက္ကူကိုတရားဝင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Ley ရဲ့ blog post ကို oh-soy လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြင်ဖူးမှာပါ။ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲမယ့်။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , အသံဗလံအများစုနှစ်ခုစာတမ်းများရေးသားထုတ်ပြန်ကြော်ငြာမှတက်ပူးပေါင်းသူကိုလူနှစ်ဦးထံမှ emanates ။ ကိုမစက္ကူတစ်ခုကိုဖြစ်မလုပ်ပဲအဘယ်သို့သောအမခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဆိုလိုသောအရာကို။
ပထမ ဦး ဆုံးစက္ကူ - နီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှု (သံမဏိ et al ။ , 2013)
ဤနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုသည် (ဆွေးနွေးခဲ့သောစာတမ်းနှစ်ခုအနက်မှပထမဆုံး) ။ သူမ၏စာနယ်ဇင်းနှင့်အင်တာဗျူးတွင် Prause သည်အခြေအမြစ်မရှိသောအတော်အတန်ပြောဆိုမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်းသူမ၏လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအားအချက်အလက်များကိုထိတွေ့မိသည့်အခါပိုမိုမြင့်မားသော EEG ဖတ်ရှုခြင်းကိုအမှန်တကယ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်မှာစွဲသူများသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များနှင့်ထိတွေ့သောအခါဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Prause ၏ရလဒ်သည်သူမဆန့်ကျင်ဘက်ပြောဆိုခဲ့သည့်တိုင်သက်သေအထောက်အထားသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အလိုဆန္ဒနည်းပါးခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းဆက်စပ်မှုပိုမိုများပြားသည် ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကို ဦး နှောက်ကပိုအားကောင်းလာစေတယ်။
ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, လေ့လာမှုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နီကိုးလ် Prause "မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်" porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာရှိခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာမရှိသေးပါလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြောပါ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက် (ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်ဘာသာရပ်များ '' အလိုဆန္ဒဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျဆင်းနေခဲ့သည်) ။ အတူတူအဲဒီနှစျခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များအရ (ရုပ်ပုံများကို) ကြည့်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်းသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကို (လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) တုံ့ပြန်မှုနည်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစွဲလမ်းမှု၏ထူးခြားချက်များဖြစ်သော sensitization & desensitization ။
ဒီဖတ်ရှုပါ စိတ်ပညာယနေ့တွင် Prause အင်တာဗျူး သူမ၏ EEG လေ့လာမှုအကြောင်းကို။ ထိုအခါခြင်းဖြင့် Prause ၏အင်တာဗျူးအောက်ရှိ2မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှု စိတ်ပညာပါမောက္ခဆရာယောဟနျအေဂျွန်ဆင်:
"ကျနော့်စိတ်ထဲနေဆဲသူမသည်လိင်ကိစ္စပုံရိပ်တွေအဘို့အမြင့်မား P300 ဖတ်သတင်းပေးပို့ကြောင်းပေးထား, ဦးနှောက်ဟာသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်သူမ၏ဘာသာရပ်များ '' မူးယစ်ဆေးစွဲတူသောဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး '' ကြောင်းဆိုကြသည်အဆိုပါ Prause မှာရှုတ်စရာပါတယ်။ ရုံရွေးချယ်မှုဟာသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါ P300 spikes ပြသသူကိုစွဲလိုပဲ။ သူမည်သို့အမှန်တကယ်ရလဒ်ဆန့်ကျင်ဘက်သောကောက်ချက်ဆွဲနိုင်မည်နည်း ငါကသူမ၏စေတယ်-အဘယ်အရာကိုသူမရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ "
ထို့နောက်ဤမှတ်ချက်ကိုဖတ်ပါ - ယောဟနျသဂျွန်ဆင်ဆက်လက်.
Prause's 8 EEG လေ့လာမှု၏သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း ၈ ခုကိုလည်းသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ အားလုံးကဂျွန်ဆင်၏ Prause ၏လေ့လာမှုသည်“ စွဲလမ်းမှုပုံစံ” (သူမနှင့် Ley တို့သည်တာဝန်မဲ့စွာရှုတ်ချပြောဆိုခြင်း) နှင့်တူညီသည်ဟုဆိုကြသည်။
'' အမြင့် Desire 'သို့မဟုတ်' ရုံ '' တစ်ဦးစွဲ? မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန် သံမဏိ et al။ (2014), Donald L. ဟီလ်တန်အသုံးပြုပုံဂျူနီယာ, MD
ပထမဆုံး Cambridge လေ့လာမှု - Valerie Voon, သောမတ်စ်ခမှဲ့, Paula BANCA, လော်ရာပေါ်တာ Laurel မောရစ်ရှိမုန်မစ်ချယ်, သူ Tatyana R. Lapa ဂျူဒီ Karr, နီးလ်အေနေဖြင့်နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်, Harrison, မာ့ခ် N. Potenza နှင့်မိုက်ကယ် Irvine။ စွဲမှုအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် ၁၁ ဦး သည်ဤဝါကျနှင့်စတင်သော Prause ၏ EEG လေ့လာမှုကိုဆွေးနွေးကြသည်ကိုသတိပြုပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating CSB ဘာသာရပ်များအတွက် P300 အပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမှတူညီရှိစေခြင်းငှါအရာ, dACC လှုပ်ရှားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထင်ဟပ်အကြံပြု .တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကသူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ရလဒ်များကိုနားမလည်ကြောင်းသူမအားစွဲလမ်းမှုတွေ့ရှိချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်ဟုယဉ်ကျေးစွာပြောကြားခဲ့သည်။
Todd Love၊ Christian Laier၊ Matthias Brand၊ Linda Hatch & Raju Hajela တို့၏အင်တာနက်အပြာစာကြည့်ရှုခြင်းအာရုံကြောသိပ္ပံ - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အသစ်တင်ခြင်း (၂၀၁၅) ။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? ဘရိုင်ယန် Y. ပန်းခြံ, ဂယ်ရီ Wilson ကယောနသန် Berger, မဿဲ Christman, Bryn Reina, ဖရန့်ဆရာတော်, Warren P. Klam နှင့်အင်ဒရူး P. Doan အားဖြင့်လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း,
Emotion မသိနှင့် Non-သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? Sajeev Kunaharan, Sean Halpin, Thiagarajan Sitharthan, Shannon Bosshard, ပေတရု Walla အားဖြင့် (2017)
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) တွင် Neurocognitive ယန္တရားများ, Ewelina Kowalewska, ယောရှုခ Grubbs, မာ့ခ် N. Potenza, မာတေယူချ် Gola, Małgorzata Draps နှင့် Shane W.Kraus ။
အွန်လိုင်း Porn စွဲ: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019), ရုဗင်က de Alarcón, ဗီယာဗြဲ de la Iglesia, Nerea အမ် Casado နှင့်အိန်ဂျယ်အယ်လ် Montejo-တစ်ဦးက Don't ။
သင်တို့သည်လည်းဖတ်နိုင်သည် ဤ အပြည့်အဝဝေဖန်မှုအဆိုပါ Prause EEG လေ့လာမှုကယ့်ကိုရှာတွေ့သောအရာကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း, ဘယ်လိုစာနယ်ဇင်းအတွက်တောင်းဆိုမှုများအမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူ align ပါဘူး။ ကျွန်မတိုဗားရှင်းကိုဖတ်ရှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒုတိယစာတမ်း - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမဟုတ်သော Ley & Prause“ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” (Ley et al ။ , 2014)
ဒုတိယစက္ကူမှာအားလုံးလေ့လာမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းအစား၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍“ စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” ဖြစ်သည် အဘယ်အရာကိုမျှအမှန်တရားကနေဝေးကွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါသည် Ley & Prause ဆွဲသော shenanigans များအားလုံးကိုပြသပြီးအလွန်ရှည်လျားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သည်။ ဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထား: တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမျှတစ်ဦးကအရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် pose ဒါဟာလုံးဝဒါခေါ်ပြန်လည်သုံးသပ် dismantles, သူတို့ကိုးကားသုတေသန၏မှားယွင်းစွာတင်ပြများစွာပါရှိသည်။
Ley ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏အလွန်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောရှုထောင့်ကညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများ / ညစ်ညမ်းသောသက်ရောက်မှုများတွေ့ရှိသည့်လေ့လာမှုများအားလုံးကိုချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ "ရည်မှန်းချက်" ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုဆိုစဉ်တွင်ဤလိင်ပညာရှင်နှစ် ဦး သည်ဤလေ့လာမှုများကိုဆက်စပ်မှုလေ့လာမှုများဖြစ်ကြောင်းချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? porn အပေါ်လေ့လာမှုများအားလုံးဆက်စပ်ဖြစ်ကြသည်။ သုတေသီများတွင်“ အပျိုစင်အပျိုစင်များ” ကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အကြောင်းအရာများကိုအချိန်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲတားဆီးရန်နည်းလမ်းမရှိသောကြောင့်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ (ထောင်နှင့်ချီသောယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်သန်းနေကြသည် ဆန္ဒအလျောက် အမျိုးမျိုးသောဖိုရမ်များအပေါ်သို့သော်နှင့်၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမိမိတို့၏ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သော့ချက် variable ကိုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ )
Ley & Prause ဆွဲယူခဲ့သောဥပမာအချို့
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်လေ့လာမှုများကို၎င်းတို့သည်“ သာ” ဆက်နွယ်မှုရှိခြင်းအပေါ်ခွင့်ပြုခြင်းမပြုဘဲသူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သီအိုရီအမျိုးမျိုးအတွက်အထောက်အပံ့အဖြစ်ညွှန်းဆိုခဲ့သည်။ ဆက်စပ်လေ့လာမှုများ.
သူတို့သည်လေ့လာမှုများအတွင်းမှကျပန်းကောက်ကျစ်ပြီးလိမ်လည်လှည့်စားသောလိုင်းများကိုသုတေသီများ၏အမှန်တကယ်အစီရင်ခံရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် ဆန့်ကျင် ကောက်ချက်။
သူတို့ကစွဲကျွမ်းကျင်သူများ၏လက်ရှိသဘောတူညီမှုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းမကြာသေးမီ, ပို. များပြား, ဆနျ့ကငျြလေ့လာမှုများ / ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလျစ်လျူရှု, 25 နှစ်ရှိပြီသလောက်ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာချက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာအမူအကျင့်စွဲသူတို့ရဲ့ထုတ်ပယ်ခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။
သူတို့ကအင်တာနက်ကိုစွဲအပေါ်ဦးနှောက်လေ့လာမှုများများစွာအသိအမှတ်ပြု (သို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ) မဟုတ်ခဲ့ချေ။
သူတို့ဟာ Ley / Prause ကောက်ချက်ဖျက်သိမ်းပြီးသောကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်နှင့်မက်စ် Planck မှာညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများဖျော်ဖြေနှစ်ခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဦးနှောက်-scan ကလေ့လာမှုများ, လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
စကားမစပ်, ၎င်းတို့၏လိုလားသူ porn အယ်ဒီတာများမိုက်ကယ် Perelman သညျ, ချားလ်စ်တခုနှင့် Peggy Kleinplatz လို့ခေါ်တဲ့အသုံးမဝင်တော့ sexology ဂျာနယ် resuscitated လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ သံသယမရှိသောအများပြည်သူအပေါ်ဤ "ပြန်လည်သုံးသပ်" foist နိုင်ရန်အတွက် (နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်ဝေမပြဘူး) ငါ Ley သည်သမိုင်းကိုထူထောင်ခဲ့သည်ဟုသံသယရှိသည်။ ဤသည်မှာ (၁) တစ်ခါမှမထုတ်ဖေါ်ဖူးသူတစ် ဦး မှစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ နယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
အောက်ခြေလိုင်း: သင် porn စွဲဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးပြောပါတယ်တစ်ခုဆောင်းပါးတစ်ခု link ကိုတွေ့မြင်သောအခါ, အရင်းအမြစ်လိုက်နာပါ။ ငါနီးပါးသင်တောင်းဆိုမှုများနောက်ကွယ်မှဤအ2အလွယ်တကူချေပချက်နှင့်တာဝန်မဲ့စာတမ်းများတဦးတွေ့ရှပါလိမ့်မယ်အာမခံနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကို Porn-သွေးဆောင် ED ကော?
Ley & Prause PIED ကဒဏ္aာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ ပို။ ပို။ ဝါဒဖြန့်။ ပထမ ဦး စွာဤစာမျက်နှာသည် PIED ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကုသသောဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပါမောက္ခများအပါအဝင်ကျွမ်းကျင်သူ ၁၂၀ ခန့်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မီဒီယာအတွက် porn-သွေးဆောင် ED: PIED အသိအမှတ်မပြုတဲ့သူကျွမ်းကျင်သူများက။ (နောက်ဆုံးသတင်း - ၂၀၁၆ မေလ ၆ ရက်မှ ၁၀ ရက်ထိအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသင်းကွန်ဖရင့်၌ Porn-ED ကို ED တင်ပြသည်။ ) အပိုင်း 1, အပိုင်း 2, အပိုင်း 3
ဒုတိယအချက်မှာ 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သမိုင်းဝင်အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့, အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများ: အနိမ့်လိင်စိတ်။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)
2010 ကတည်းကဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ: 2010 ကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ erectile အလုပ်မဖြစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖေါ်။ အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ 10% ကနေ 40% အရွယ်ရှိနေစဉ် 14 လေ့လာမှုများမှာတော့ 37 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း, 16% ကနေ 37% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ နုပျို ED နှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်သူမျှမ variable ကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးကနောက်ဆုံး 2006-10 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီ streaming porn (20) ၏ထွန်းကားထက်အခြား (ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းကိုချဖြစ်ကြသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု 20 ကတည်းကတက်သာ 40%, အထီး 4-1999 အတွက်အဝလွန်နှုန်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည် - စာပေ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ရှု) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်မကြာသေးမီခုန်မြောက်မြားစွာ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့် arousal ဖို့ "porn စွဲ" ၏ထုတ်ဝေရန်နှင့်တိုက်ဆိုင်။
မကြာသေးမီကအသက် ၄၀ နှစ်အောက်ယောက်ျားလေးများ၏ ED နှုန်းသည် ၅၀၀% မှ ၁၀၀၀% အထိတိုးလာသည်ကိုရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိပါကအထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်သူများသည် PIED နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်မှုရှိသည်ဟုယူဆခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။
တတိယယခုရှိပါတယ် 40 လေ့လာမှုများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲချိတ်ဆက်။ ဖြည့်စွက်ကာ, 75 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပြီ ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များ အထက်ပါသုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသောဤစာမကျြနှာပျေါတှငျတှေ့ရှိနိုငျ:
ပြန်ဖွင့် Accounts ကိုစာမျက်နှာ 1
ပြန်ဖွင့် Accounts ကိုစာမျက်နှာ 2
ပြန်ဖွင့် Accounts ကိုစာမျက်နှာ 3
အပ်ဒိတ်: Ley ရဲ့ Co- စာရေးဆရာနှင့်မဟာမိတ် နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်တော်မူပြီးမှ, porn-သွေးဆောင် ED debunking နှင့်အတူ ပို. ပို. အစွဲအလမ်းဖြစ်လာသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်4နှစ်သိက္ခာမဲ့စစ်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ စာရေးသူကိုမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် နီကိုးလ် Prause ရှိပါတယ် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး နှင့်တစ် ဦး လုပ်။ ပြီးလျှင်, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များအားတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes အတူတူ # 12, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, ဂါယူဆပါသည် #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15။ Prause သည်ဤအစွန်းရောက်ခြင်းနှင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အပြုအမူများကိုအဘယ်ကြောင့်ပြုလုပ်သည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာအများကြီးပိုများပါတယ် - နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း).
အကျိုးစီးပွားသည်ဒါဝိဒ် Ley ဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများကို (ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ)
Nicole Prause သည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်ခြင်းမှလည်းအကျိုးရရှိသည်။ သူမဆီမှ Liberos ဆိုဒ် (ဖယ်ရှားပြီးချိန် မှစ. စာမျက်နှာနှင့် Prause အင်တာနက်ကိုကနေဖယ်ရှားခဲ့သည် WayBack စက်):
"လိင်စွဲလမ်း" ပို. ပို. ဥပဒေရေးရာတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ကာကွယ်ရေးအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့သိပ္ပံနည်းကျ status ကိုဆငျးရဲသားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သိပ္ပံပညာ၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုဖော်ပြရန်ကျွမ်းကျင်သူသက်သေခံချက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အဖွဲ့များကိုအောင်မြင်စွာသူတို့ရဲ့ client ကိုကိုယ်စားပြုဖို့ဒီဧရိယာအတွက်သိပ္ပံပညာ၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုနားလည်ကူညီရန်ဥပဒေရေးရာအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Legal ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်သက်သေခံချက်ယေဘုယျအားဖြင့် [လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ] တစ်နာရီခြားတစ်ခါနှုန်းကိုအပေါ်ငွေကောက်ခံနေကြပါတယ်။
အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးမှာ Prause & Ley သည်ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်း၊ ကြည့်ပါ ဒီစာမျက်နှာ ၎င်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော“ astroturf” လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် UCLA သုတေသီနီကိုးလ်ပရာ့စ်၏အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဖန်တီးခဲ့သည်။
ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ #4:နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒါဝိဒ်သည် Ley မှတဆင့်ပိုက်ဆံစေသည် ကျဲအိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသူကအရာမဆငျမခွ (ထိုစွဲလမ်း-deniers '' သဘောတရားသည်သူ၏နှစ်ခုစာအုပ်တွေထဲမှာထွက် set ကိုအားပေးအားမြှောက်ဘယ်မှာ လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာလျစ်လျူရှု နှင့်အသစ်၏အရေးပါမှု compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရောဂါ ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖြေရှာတဲ့ကို manual ထဲမှာ။ Ley porn သူ၏တဖက်သတ်အမြင်များ featuring ကသူ၏များစွာသောဆွေးနွေးပွဲများများအတွက်လျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ 2019 တင်ဆက်မှုများတွင် Ley ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ပေါ်လာသော: အပြုသဘောဆောင်သောလိင်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ.
အဆိုပါ naysayers '' pseudoscience ၏လျင်မြန်ချေပချက်ဘို့ဂါယူဆပါသည်၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်: porn ဒဏ္ဍာရီ - စွဲလမ်းပြီးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နောက်ကွယ်မှာအမှန်တရား။